‘राज्यले दिएको सेवा सुविधा लिन जनताले कसैलाई घुस दिनु पर्दैन’ :- खड्गबहादुर फागु - Janapukar
पूर्वी मोरङको केन्द्रका रुपमा स्थापित उर्लाबारी नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसतर्फका उम्मेद्वार खड्गबहादुर फागु अत्याधिक मतका साथ विजयी भए । एमालेको गढका रुपमा मानिएको उर्लाबारीमा कांग्रेसले ऐतिहासिक सफलता हात पार्ने क्रममा फागुले ११ हजार ६ सय ३२ मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित भए । उनले ३ हजार ९० मत अन्तरले एमाले उम्मेदवार भूपालसिं जिमीलाई पाखा लगाएका थिए । जनताले अत्याधिक मत दिएर विजयी बनाएपछि उनले उर्लाबारीलाई समृद्ध र नमूना नगरपालिका बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरुलाई चलयमान बनाउँदै जनताका काम छिटो र छरितो बनाउने काम उनले गरेका छन् । उनैसँग समसामायिक बिषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :-
तपाईले पहिलो प्राथमिकतामा के राख्नु भएको छ ?
– उर्लाबारी नगरपालिकाको ढल निकास, फोहोर मैला ब्यवस्थापन, बजार ब्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिबद्धका साथ लागिरहने छु ।
उर्लाबारीमा फोहोर ब्यवस्थापन जटिल देखिएको छ । त्यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
– उर्लाबारीमा फोहोर ब्यवस्थापन पनि एउटा जटिल समस्या नै हो । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन आवश्यक छ । फोहोर ब्यवस्थापनका लागि यसअघि किनेको जग्गाका बिषयमा गम्भिर भएर छानविन हुन्छ । साथै जतिसक्दो मानव बस्तीलाई असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानको खोजी गरी ब्यवस्थित डम्पिङ साइडको ब्यवस्थापन गर्ने छौं । यसमा सम्पूर्ण उर्लाबारीबासीको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
उर्लाबारीलाई कस्तो बनाउने तपाईको योजना छ ?
– पूर्वी मोरङको केन्द्रका रुपमा स्थापित उर्लाबारी नगरपालिकालाई समृद्ध र नमूना नगरपालिका बनाउने मेरो योजना छ । यहाँ भएका स्रोत साधनहरुलाई सही रुपमा सदुप्रयोग गर्दै आर्थिक रुपमा मजबुत बनाउन सकिने सम्भावनाहरु प्रशस्तै छन् । साथै उर्लाबारीलाई नमूना नगरपालिका बनाएर देशमै परिचित गराउन लागि पर्नेछु ।
कसरी सम्भव छ उर्लाबारीलाई नमूना नगरपालिका बनाउने ?
– जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, ढल, खानेपानीलगायत विकास निर्माणका महत्वपूर्ण कार्यहरु पूरा गर्दै उर्लाबारीलाई नमूना नगरपालिका बनाउन सकिन्छ । साथै बेतिनी सीमसारलगायत पर्यटकीय स्थलको माध्यमबाट पनि यस नगरलाई अघि बढाउन सक्ने आधार छन् । मावा देखि सुनझोडासम्मको हाईवे लाईनमा पानीलाई निकास दिनका निम्ति ठूलो ड्रेन निर्माण गर्दै १ सय ५ फिट खाली गरिने छ । जसले गर्दा उर्लाबारीको सडक फराकिलो बन्नुको साथै मुहार नै फेरिन्छ । विविध तरिकाले उर्लाबारीलाई देशकै नमूना नगरपालिका बनाउने सम्भावनाहरु छन्, त्यसलाई सदुप्रयोग गर्दै अघि बढ्ने छौं ।
उर्लाबारीलाई सीमसारयुक्त क्षेत्र यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । बेतिनी सीमसारलगायतको विकास तथा प्रवद्र्धनमा के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
– उर्लाबारीलाई पर्यटकीय नगरीका रुपमा परिचित गराउने सवालमा नगरपालिकाको तर्फबाट सीमसार क्षेत्रहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा सदैब साथ र सहयोग रहन्छ । बेतिनी सीमसारलगायत अन्य सीमसार क्षेत्रहरुको उचित विकास गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु यस नगरमा भित्र्याउन पहलकदमी अघि बढाउने छौं । आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै रमणीय स्थलका रुपमा अघि बढाउन लागि पर्ने छौं । बेतिनी सीमसारको गुरु योजना बनिसकेको अवस्था छ । त्यसलाई पूर्वकै आकर्षक केन्द्रका बनाउने काम तीब्र गतिमा हुनेछ ।
उर्लाबारीको आम्दानीको स्रोत के हो ?
– सरकारले दिने अनुदान र आन्तरिक स्रोतहरू नै यस नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन् । साथै उर्लाबारीमा रहको सीमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय हिसावले अगाडी बढाउने र स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका उद्योग कलकारखानाको स्थापना गरी आम्दानीको स्रोत बढाउने योजना रहेको छ ।
पाँच बर्षभित्र के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
– मैले जनताका घरदैलोमा पुगेर उहाँहरुको समस्याका बारेमा जानकारी लिएको छु । उहाँहरु सबैले गाउँको विकास होस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ । मैले पनि सोही अनुसार काम गर्ने योजना बनाएको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, ढल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको विकास मेरो प्राथमिकतामा रहेका छन् । उर्लाबारीका खोला नालाहरुलाई तटबन्धन गरेर खेती योग्य जमिनमा सिचाईहरु पु¥याउने मेरो योजनाभित्र छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ । मैले चुनाव ताका जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न अहोरात्र खट्ने छु । मैले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न इमान्दारिताको साथ लाग्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
फ्रि वाईफाई जोनदेखि निकै महत्वकांक्षी योजनाहरु घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ । के पूरा होलान त ?
– मैले जनतालाई झुक्याउने र सम्भव नहुने योजनाहरु घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छैन । मैले गरेका प्रतिबद्धताहरु पाँच बर्षभित्र पूरा गर्न दृढ रुपमा लाग्ने छु । पाँच बर्षभित्रमा उर्लाबारीका नौं वटै वडामा फ्रि वाईफाई जोन बनाउने छु । म जनताको काम गर्नका लागि मेयर बनेको हुँ । तसर्थ म जनतालाई घात गर्ने कुनै काम गर्ने छैन ।
कांग्रेसबाट तपाई मेयर बन्नु भएको छ, तर एमालेतर्फ बहुमत छ । कसरी तपाईको प्रतिबद्धताहरु पूरा होलान् ?
– हामी १४ गतेसम्म कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता थियौं । यतिबेला हामी पार्टीका कार्यकर्ता भन्दा पनि जनप्रतिनिधि हौं । हामी जनताका काम गर्न आएका प्रतिनिधि भएका कारण राजनीति स्वार्थभन्दा माथी उठेर जनताको हितमा काम गर्नु पर्छ । हामीले सदैव जनताको हितमा रहेर काम गर्ने छौं । बिकास निर्माणका कार्यमा बहुमत र अल्पमतको खेल भयो भने हामी जनता समक्ष जान्छौं । यसको फैसला पनि जनताबाटै हुन्छ । हामी जनताका आधारभूत आवाश्यकताहरुलाई पूरा गर्न इमान्दार भएर लाग्नु अतिआवश्यक छ ।
कर्मचारीहरुलाई चलयमान बनाउन के कस्ता योजना अघि सार्नु भएको छ ?
– सरकारी तलब खाएर बसेका कर्मचारीहरुले जनताका काम सहज र छरितो तरिकाले गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कर्मचारीहरुको कामलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सिसी क्यामेरा जडान गर्दै उनीहरुको गतिबिधिको निगरानी बढाएका छौं । अब नगरपालिकामा कुनै काम लिएर आउँदा कुनै झन्झट खेप्नुु पर्दैन । प्रक्रिया पुगेर आएका कामहरु जतिसक्दो चाँडो हुने ब्यवस्था मिलाएका छौं । राज्यले दिएको सेवा सुविधा लिन जनताले कसैलाई घुस दिनु पर्दैन ।